Fumax SMT trano dia nanamboatra ny masinina X-Ray hijerena ireo singa miraikitra toy ny BGA, QFN… sns
X-ray dia mampiasa taratra X misy herinaratra ambany hamantarana zavatra haingana nefa tsy hanimba azy ireo.
1. Faritra fampiharana:
IC, BGA, PCB / PCBA, fizahana dingana amin'ny alàlan'ny fipetrahana eny ambonin'ny tendrombohitra sns.
3. Fiasan'ny X-Ray:
Mampiasa lasibatra misy fiatraikany mahery vaika hamokarana fidirana X-Ray hizaha toetra ny kalitaon'ny rafitra elektronika, vokatra fonosana semiconductor, ary ny kalitaon'ny karazana tonon-taolana mifangaro SMT.
4. Inona no ho tsikaritra:
Fitaovana metaly sy ampahany, fitaovana sy faritra plastika, singa elektronika, singa elektronika, singa LED ary triatra anatiny hafa, fitadiavana kilema zavatra avy any ivelany, BGA, board circuit ary famakafakana famindran-toerana anatiny hafa; fantaro ny lasitra banga, ny lasitra virtoaly ary ny lesoka BGA welding hafa, ny rafitra microelectronic ary ny singa mifatotra, ny tariby, ny fametahana, ny fanadihadiana anatiny ny faritra plastika.
5. Zava-dehibe ny X-Ray:
Ny teknolojia fizahana X-RAY dia nitondra fanovana vaovao tamin'ny fomba fanaraha-maso famokarana SMT. Azo lazaina fa i X-Ray no safidy be mpitia indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ireo mpanamboatra izay maniry fatratra ny hanatsara ny haavon'ny famokarana SMT, hanatsara ny kalitaon'ny famokarana ary hahita ny tsy fahombiazan'ny fivorian'ny fizaran-tany amin'ny fotoana mahamety azy. Miaraka amin'ny firoboroboan'ny fampandrosoana mandritra ny SMT, dia sarotra ny mampihatra ny fomba fitadiavana lesoka hafa noho ny fetrany. Ny fitaovana detection automatique X-RAY dia ho lasa fifantohana vaovao amin'ny fitaovana famokarana SMT ary mitana andraikitra lehibe eo amin'ny sehatry ny famokarana SMT.
6. Tombontsoa X-Ray:
(1) Afaka manara-maso ny fandrakofana 97% ny lesoka amin'ny fizotrany, tafiditra ao fa tsy voafetra amin'ny: soldering diso, bridging, tsangambato, solder tsy ampy, lavaka, singa tsy hita, sns. toy ny BGA sy CSP. Inona koa, ao amin'ny SMT X-Ray dia afaka mijery ny maso mitanjaka sy ireo toerana izay tsy azo zahana amin'ny fitsapana an-tserasera. Ohatra, rehefa heverina fa diso ny PCBA ary miahiahy fa tapaka ny sosona anatiny ao amin'ny PCB, X-RAY dia afaka manamarina azy haingana.
(2) Mihena be ny fotoana fanomanana fitsapana.
(3) Ny lesoka izay tsy takatry ny saina amin'ny fomba fitiliana hafa dia azo jerena, toy ny: fantsona diso, lavaka amin'ny rivotra, famolavolana ratsy, sns.
(4) Indray mandeha ihany no ilaina ny fisavana ny takelaka misy lafiny roa sy maro sosona indray mandeha (miaraka amina fisoratana anarana)
(5) Ny fampahalalana fandrefesana mifandraika dia azo omena hanombanana ny fizotry ny famokarana ao amin'ny SMT. Toy ny hatevin'ny famafazana solder, ny habetsaky ny solder ao ambanin'ilay mpiraikitra, sns.